Uyilungisa njani inyathelo lakho lenoveli ngenyathelo kunye neziqu zakho ngaphandle kokubhenela kwiqela lesithathu | Uncwadi lwangoku
Emva kokuba nombono, ukuyikhulisa kunye nokuyiphuhlisa ngokubhaliweyo, ngaloo ndlela siphelisa inoveli ethi ngokoluvo lwethu inakho konke ukubonakala kwaye ifundwe ngabafundi abaninzi, sihlala sicinga ukuba icandelo elinzima liphelile. Nangona kunjalo, into enzima ngokwenene iqalile nje. Mhlawumbi ndiyabaxa xa ndisithi kunzima kwaye kufanele ukuba ndithi "uyadika." Ndiyathetha Inkqubo yokulungisa inoveli yakho.
Olu lungiso luyinxalenye yenkqubo yokubhala kwaye phantse luyimfuneko njengenkqubo yokuyila, kuba lusivumela ukuba singaneli nje ukulungisa iimpazamo zegrama kunye nopelo esinokuthi siluphose xa sibhala ngokukhawuleza, kodwa sinokutshintsha amabinzana okanye amabinzana enziwe ngezinye ezintsusa ngakumbi kwaye oko kunika intsingiselo ngakumbi kwimbali yethu.
Kungenxa yoko le nto kweli nqaku ndifuna ukukunceda ngokulungiswa kwinoveli yakho ukuba ukunye naye ngoku. Linyathelo elilula neliya kukunceda lungisa inoveli ngokwakho ngaphandle kokubhenela kubantu abakhethekileyo. Yintoni ebalulekileyo, ngakumbi ukuba yinoveli yokuqala oza kuyilungisa, kukuba ngaphambili ujonge ulwazi malunga nayo ukuze wazi ikakhulu ukuba zeziphi iimpazamo eziqhelekileyo xa ulungisa isicatshulwa. Ngale ndlela awuyi kwenza okufanayo, okanye ubuncinci, uya kuzithemba ngakumbi.
1 Iindidi zezilungiso
1.1 Ukulungiswa kwegrama
1.2 Ukulungiswa kopelo
1.3 Ukulungiswa kweesemantic
1.4 Ukulungiswa kwesakhiwo
1.5 Ukulungiswa kwesitayile
Okulandelayo sikuxelela ukuba ziphi zonke iintlobo zezilungiso ezikhoyo kwaye sikuxelele indlela yokulungisa inyathelo lakho ngenqanaba.
Kolu lungiso, siya kunika ingqalelo ekhethekileyo ukuba ngaba zilungiso lombhalo oguqulweyo kuba sithetha:
Isini kunye nenombolo.
Isivumelwano phakathi kwesihloko nesivisa.
Olu hlobo lolungiso luhlala luxhomekeke kulungiso esiza kuchaza ngalo ngezantsi: ukulungiswa kwemigca.
Kunokuthiwa lolona lolona lubalulekileyo noluyimfuneko kuzo zonke kuba sibhekisa ku:
La ukulungiswa kopelo ngabom okanye ngokungazi. Ukuba sifuna ukubeka upelo olugwenxa ngenjongo siya kuyibeka ngoonobumba.
Iimpazamo zokubhalaIsithuba esiphindwe kabini, ii-indents, njl.
Kwaye okokugqibela iimpazamo kwiziphumlisi etshintsha ngokupheleleyo intsingiselo yezivakalisi kunye / okanye eyaphula imigaqo yeziphumlisi.
Olu hlobo lolungiso lufuna ubuncinci Ukufundwa kabini kunye nokuphononongwa kabini: enye ngumbhali womsebenzi ngokwakhe kunye nomnye umntu onolwazi oluncinci okanye oluncinci ngemithetho yeziphumlisi kunye nopelo.
Inokuba sesinye sezilungiso ezimbalwa esinokuthi singahoyi, nangona kungacetyiswanga njalo. Kolu hlengahlengiso lwesemantic into esiyenzayo yile lola imo yabalinganiswa yencoko yababini ngakumbi o thintela intetho yolunye ulwimi okanye ulwimi lwesiqhelo kunesiqhelo yolwimi lwethu. Siyabaqonda kwaye abafundi abavela kuluntu lwethu olunye oluzimeleyo nabo bayaziqonda, kodwa abo bavela kwezinye iindawo zejografi banokungaziqondi. Oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo.
Kufuneka sigcine engqondweni ukutsiba kwexesha kwinoveli yethu. Kolu hlobo lwesakhiwo singenza impazamo kwaye sibhidanise umfundi. Nangona kunjalo, ukuba ubume bencwadi yethu bunjalo umgca, azisayi kubakho zininzi iingxaki ezinjalo.
Ngesi sizathu, kubalulekile ukuba ubhale okanye ubuncinci uphuhlise umxholo wenoveli kwasekuqaleni. uhlala ushiya ngokucacileyo, "isithuba" ekudalweni komzuzu.
Kuxhomekeke kwimvelaphi yombhali, imfundo yakhe kunye nezinye izinto, uya kuba nesimbo esimiselweyo xa ebhala. Nangona kunjalo, ukuba usebenzela indlu yokupapasha, kuqhelekile ukuba athobele "imigaqo" ethile yokugcina imigaqo ethile xa ebalisa. Ngaphambi kolu hlobo lwezilungiso kuya kufuneka sithathele ingqalelo isitayile Kuya kuxhomekeka kuhlobo loncwadi, umbhali, umpapashi kwaye ukongeza kubaphulaphuli ekubhekiswa kulo.
Kwaye ngoku uyazi zonke iintlobo zezilungiso ezinokuthi zenziwe kwisicatshulwa, lixesha lokuba usebenze ukuze usebenze kunye nezicatshulwa ekusafuneka sizilungisile. Vuthulula idrowa yeenoveli kwaye uqalise namhlanje. Kungoko kuphela apho uya kuthi ubone ukuba kunokwenzeka ukuba incwadi yakho ipapashwe kwangaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Uyilungisa njani inyathelo lakho lwenoveli ngenyathelo
Izicatshulwa ezili-10 malunga nolwandle ezifumaneka kuncwadi